မှားတတ်သောစကားလုံးများ (Commonly Confused Words by Guy Perring) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ဒီနေရာမှာ မှတ်သားထားရမယ့် စည်းမျဉ်းက စိတ်ခံစားမှုကို ပြောချင်ရင် “-ed” ပုံစံကို သုံးရမယ်၊ တစ်ခုခုအကြောင်းကို ပြောပြချင်ရင် “-ing” ပုံစံကို သုံးရမယ် ဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်ရှင်က ပျင်းစရာကောင်းတယ် boring၊ အဲဒီတော့ ဒို့ ပျင်းတယ် bored လို့ သုံးမှမှန်ပါမယ်။ ရုပ်ရှင်က ကြောက်စရာကောင်းတယ် frightening ဆိုရင်တော့ ဒို့ကြောက်မှာပေါ့ frightened ဖြစ်မှာ။ အဲဒီစည်းမျဉ်းအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ခွဲထားတဲ့ စကားလုံးအတွဲတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဥပမာ fascinating/fascinated (ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်သော/ညှို့ယူဖမ်းစားခံရသော)၊ exciting/excited (စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော/စိတ်လှုပ်ရှားသော)၊ relaxed/relaxing (သက်တောင့်သက်သာ ရှိသော/ သက်တောင့်သက်သာရှိစေသော) surprised/surprising (အံ့သြသော/ အံအားသင့်ဖွယ်သော) စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ရောတတ်ရှုပ်တတ်တဲ့ နောက်စကားလုံး နှစ်လုံး တစ်တွဲကတော့ borrow/lend အတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လုံးစလုံး ငှားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါဘဲ။ သို့သော် ဥပမာ မိုးရွာလာပြီ၊ မင်းရဲ့ ထီးကို ငါ့ကို ငှားနိုင်မလား၊ ငါက မင်းရဲ့ ထီးကို ငှားလို့ ရမလား ဆိုရင် It has started to rain. Could you _________me your umbrella? / Could I _________ your umbrella? ငှားတာကိုဘဲ borrow နဲ့ lend ကွဲပြားအောင် ခွဲခြားသုံးရတော့မယ်။ ငှားပြီးရင် ကိုယ်က ယူသွားမှာလား၊ ပေးလိုက်ရမှာလား။ သတိထားဖို့လိုတယ်နော်။ ပထမကွက်လပ်က ပေးလိုက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သင့်တော်တယ်ဆိုတော့lend၊ ဒုတိယ အကွက်က ယူသွားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သင့်တော်တယ်ဆိုတော့ borrow ထည့်ရမယ်။ အလွယ်ဆုံး သဒ္ဒါရှုထောင့်က ခွဲခြားနည်းတစ်နည်း ပေးလိုက်ဦးမယ်။ ပေးလိုက်တဲ့ အငှား lend မှာ အပေးခံ တိုက်ရိုက်ကံပုဒ် direct object (umbrella) နဲ့ လက်ခံယူသူ သွယ်ဝိုက်ကံပုဒ် indirect object (me) ဆိုပြီး ကံပုဒ်နှစ်ခု ရှိတယ်။ မြန်မာသဒ္ဒါမှာတော့ ကံပုဒ်နှစ်ခုလို့ မခေါ်ဘဲ ကံပုဒ်နဲ့ ဆိုက်ရောက်ရာပုဒ်လို့ ခေါ်တယ်။ ယူသွားဖို့ ငှားတဲ့ borrow ကတော့ အငှားခံ တိုက်ရိုက်ကံပုဒ် direct object (umbrella) ဆိုတဲ့ ကံပုဒ် တစ်ခုဘဲ ရှိတယ်။ သဒ္ဒါနည်းအပြင် Ambrose Bierce ရဲ့ အသိအကျွမ်း ဆိုတာ ဘာလဲ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကို မှတ်ထားရင်လည်း borrow နဲ့ lend ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်။ အသိအကျွမ်း ဆိုတာ “A person who we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to” ဖြစ်ပါသတဲ့။ ကိုယ်က လိုတာရှိရင် အသိအကျွမ်းဆီမှာ သွားချေးငှားမယ်၊ ဒါပေမယ့် သူကလိုလို့ လာချေးငှားရင်တော့ ပေးရလောက်အောင်မခင်တဲ့သူပါတဲ့။
Bring/take စကားလုံးအတွဲကလည်း ရောတတ်ပါတယ်။ ခေါ်လာ/ခေါ်သွား သို့မဟုတ် ယူလာ/ယူသွား အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုစထွက်မယ်ဆိုရင် လေဆိပ်ကို ပို့ပေးနိုင်တယ် လို့ ပြောဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး If we leave now, I can bring you to the airport လို့ မှားပြောမိတတ်တယ်။ bring အစား take လို့ သုံးမှ မှန်ပါတယ်။ ခေါ်လာတာ မဟုတ်ဘဲ ခေါ်သွားတာ ဖြစ်လို့ပါ။ ပြောသူဘက်ကို ဦးတည်ရွှေ့လျားမှ bring ကို သုံးရပါတယ်။ ဥပမာ “Come here and bring me your homework”. ''ဒီကိုလာ၊ အိမ်စာပါယူလာခဲ့'' လို့ သုံးရင် မှန်ပါတယ်။ come/go လာသည်/သွားသည် အတွဲဆိုရင်လည်း အလားတူ မှားတတ်ပါတယ်။ သုံးနည်းလမ်းညွှန်ကတော့ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ လမ်းညွှန်လို့ ပြောရတာကတော့ ဘယ် စည်းမျဉ်းမဆိုချွင်းချက်ရှိတတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မှားတတ်တဲ့ စကားလုံးအတွဲအချို့ကို ဥပမာ ဖော်ပြပါဦးမယ်။
advice/advise (အကြံဥာဏ်၊ အသိပေးချက်/အကြံပေးသည်၊ အသိပေးသည်)
a) He gave me some good ________ about investing.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းအချို့ သူက ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တယ်။
b) We will ________you of any changes later. နောက်ပိုင်း အပြောင်းအလဲရှိရင် အသိပေးပါ့မယ်။
a) The new model of car is very __________. မော်ဒယ်အသစ် ကားက အလွန် (ဆီစား) သက်သာတယ်။
b) The latest __________ forecast for Malaysia is very positive. မလေးရှားနိုင်ငံအတွက် နောက်ဆုံး စီးပွားရေး ခန့်မှန်းချက်ကတော့ အလွန်ကောင်းနေပါတယ်။
Sensible/sensitive (အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် စဉ်းစားတတ်သော/စိတ်ဆိုးလွယ် အာရုံခံစားလွယ်သော)
a) Be careful when you comment about his fashion sense. He’s very ________. သူ့ကို ၀တ်တာစားတာ လိုက်မလိုက် သတိထားပြော၊ သူက အင်မတန်အထိမခံဖြစ်တတ်တယ်။
b) It is _________ to keep note of your passport number. နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်ကို မှတ်ထားရင် ကောင်းလိမ့်မယ်။
1 - a)advice
1 - b)advise
2 - a)economical
2 - b)economic
3 - a)sensitive
3 - b)sensible
(Guy Perring ၏ Commonly Confused Words အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
Credit to http://www.myanmar-network.net/forum/topics/commonly-confused-words-by